pH / ORP / ION Series Vagadziri & Vatengesi - China pH / ORP / ION Series Factory
Pamhepo pH / ORP Meter T4000
Maindasitiri pa-mutsetse PH / ORP mita ndeye pa-line mvura mhando yekutarisa uye yekudzora chishandiso ine microprocessor.
PH maelekitirodhi kana maORP ma electrode emhando dzakasiyana anoshandiswa zvakanyanya musimba remagetsi, petrochemical indasitiri, metallurgia zvigadzirwa zvemagetsi, indasitiri yemigodhi, indasitiri yemapepa, yekuvirisa yeinjiniya, mushonga, chikafu nechinwiwa, kurapwa kwemvura kwezvakatipoteredza, aquaculture, kurima kwemazuva ano, nezvimwe.
Pamhepo pH / ORP Meter T6000
Yakapetwa kaviri yemunyu bhiriji dhizaini, yakapetwa kaviri seepage interface, inopesana nepakati reverse seepage
Iyo ceramic mugomba paramende electrode inodonha kunze kwechimiro, izvo zvisiri nyore kuvharidzirwa.
✬High-simba girazi girobhu dhizaini, girazi rinoonekwa rakasimba.
ArgeMakuru ekuona mababu anowedzera kugona kunzwisisa hydrogen ions, uye anoita mushe munzvimbo yakaoma.
✬Iye electrode zvinhu PP ine yakanyanya kukanganisa kuramba, kusimba kwesimba uye kuomarara, kuramba kune akasiyana ma organic solvents uye acid uye alkali ngura.
Uine simba rakasimba rekudzivirira-kupindira, kugadzikana kwepamusoro uye kureba kufambisa nzvimbo. Hapana chepfu pasi pemakemikari akaomarara.
Yakagadzirirwa mhando yemvura yakajairika.
Yakapetwa kaviri munyu bhiriji dhizaini, yakapetwa kaviri seepage interface, inopesana nepakati reverse seepage.
Iyo ceramic pore paramende electrode inobuda kunze kweiyo interface uye hazvisi nyore kuvharidzirwa, zvinoenderana nekutarisisa kweakajairika mhando yemvura nharaunda nhepfenyuro.
Yakakwira-simba girazi girobhu dhizaini, girazi rinoonekwa rakasimba
Iyo electrode inotora yakaderera ruzha tambo, chiratidzo chinobuda chiri kure uye chakadzikama
Makuru ekuona mababu anowedzera kugona kuona hydrogen ions, uye anoita mushe mune yakajairika mhando yemvura nharaunda nhepfenyuro.
Yakagadzirirwa Hydrofluoric acid nharaunda.
Iyo electrode inogadzirwa ne-Ultra-yepasi impedance-inonzwisisika girazi firimu, uye zvakare ine hunhu hwekukurumidza kupindura, kuyerwa kwakaringana, kudzikama kwakanaka, uye hazvisi nyore kuita hydrolyze mune iyo hydrofluoric acid nharaunda nhepfenyuro. Iyo reference electrode system ndeye isina-porous, yakasimba, isiri-yekuchinjana mareferensi system. Zvizere nzvenga matambudziko akasiyana anokonzerwa nekuchinjana uye kuvhara kwenzvimbo yemvura, senge referensi electrode iri nyore kusvibiswa, bhuku re vulcanization chepfu, kurasikirwa kwereferenzi uye mamwe matambudziko.
Pamhepo pH / ORP Meter T6500
Iyo pH (acid, alkalinity) kukosha, ORP (oxidation, kudzikisira kugona) kukosha uye kukosha kwekupisa kwemvura ine mhinduro yakaenderera ichiongororwa uye kudzorwa.
CS1668 Plastic Housing pH Switch
Yakagadzirirwa viscous fluids, protein nharaunda, silicate, chromate, cyanide, NaOH, mvura yegungwa, brine, petrochemical, gasi chaiwo zvinwiwa, yakanyanya-kumanikidza nharaunda.
CS1500 Girazi Housing pH Sensor
Chlorophyll Sensor, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Ph Sensor Electrode, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Kufambisa TDS Sensor,